Izindaba - Isiteshi samandla kagesi esikhulu kunazo zonke emhlabeni esakhiwayo – Idamu Lesiteshi Samanzi iBaihetan sesizofinyelela phezulu.
Isiteshi samandla kagesi esikhulu kunazo zonke emhlabeni esakhiwayo –iBaihetan Hydropower Station Dam sesizofinyelela phezulu.
Isiteshi esikhulu samandla kagesi emhlabeni esakhiwayo - idamu lesiteshi samanzi iBaihetan sesizofinyelela phezulu. Akubanga khona ukuqhekeka kwezinga lokushisa selokhu kuqale ukuthululwa kwezigidi eziyi-8 m³!
Isiteshi esikhulu kunazo zonke emhlabeni esakhiwayo nesinzima kunazo zonke esakhiweni esikhulu samandla omoya — iBaihetan Hydropower Station. Sprint phezulu komugqa wonke!
Inqubo yokwakhiwa kwedamu le-Baihetan Hydropower Station ibeka amarekhodi amaningi:
Imingcele yokuzamazama komhlaba yedamu le-arch eliphezulu lamamitha angama-300 - Cha. 1 emhlabeni
Ngokokuqala ngqa emhlabeni, kwasetshenziswa ukhonkolo osimende oshisa kancane obandayo kulo lonke idamu ledamu lamakhothamo aphakeme ngamamitha angama-300. Idamu limele inani lamanzi aphelele afinyelela kumathani ayizigidi eziyi-16.5 - uNombolo 2 emhlabeni
I-Arch dam ingamamitha ayi-289 ukuphakama - No. 3 emhlabeni
Idamu leli lingumgogodla wokwakhiwa kwephrojekthi yesiteshi samandla kagesi, lenza umsebenzi obalulekile wokugcina amanzi nokukhulula izikhukhula. Idamu le-Baihetan Hydropower Station lidamu lokukhonkolo eliphakeme eliphindwe kabili eligobele kabili. Ukuphakama kwedamu eliphakeme ngamamitha angama-289, ubude be-arc edamini lamamitha angama-709. Umzimba wedamu uhlelwe ngemigodi engu-6 yokuphambukisa engezansi, izimbobo ezi-7 ezikhipha izikhukhula nezimbobo zemitha eziyisi-6 zokukhipha izikhukhula, isakhiwo esiyinkimbinkimbi.
Ngokuya ngemininingwane evela eJinsha River Hydrometeorological Center, 2020 Baihetan Hydropower Station Dam Area, izinsuku ezingama-251 zesimo sezulu esinomoya ngaphezu kwezinga 7, 70.5% lonyaka wonke. Izimo zezulu endaweni yesiteshi saseBaihetan Hydropower Station ziletha izinselelo eziningi ekuchithekeni kokhonkolo edamini.
Ngaphezu kwesimo sezulu, idamu le-Baihetan Hydropower Station lanqotshwa izinkinga eziningana zobuchwepheshe emhlabeni jikelele. Cha. 1 emhlabeni ngamapharamitha wokuzamazama komhlaba kwedamu le-arch likakhonkolo le-ultra-high lamamitha ayi-300, ligcwalisa izimo eziyinkimbinkimbi ze-geological, izikhala eziningi zobuchwepheshe ekwakhiweni kwamadamu we-arch aphezulu kakhulu.
Ukusetshenziswa kokhonkolo osimende oshisa phansi kulo lonke idamu ledamu lamakhilomitha angu-300 eliphakeme kakhulu, ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha bokwakhiwa kwesigaba sokuqala okuqonde ngqo okwenziwe ngobuciko besango lesango, nokusebenza okuphephile nokusebenzayo kwama-cranes ekhebula lamapulatifomu ayisikhombisa angabokuqala embonini. Kusungulwe ukuphathwa kwemininingwane yokwakha ehlakaniphile. Ipulatifomu, ukubona ukuphathwa okuhle nokulawulwa kwawo wonke umjikelezo wokwakhiwa nokusebenza, kanye nedamu lesiteshi seBaihetan Hydropower Station selibe yidamu "elihlakaniphe kakhulu" emlandweni.
Kubikwa ukuthi ukuthululwa kokhonkolo komzimba omkhulu weDamu leBaihetan, umthamo ophelele ufinyelela ku-8 million cubic metres, uhlukaniswe izigaba zamadamu angama-31. Akukaze kube khona ukuqhekeka kwezinga lokushisa selokhu kwaqala ukuthululelwa. Zonke izinkomba ziyahlangabezwa nezinga “leprojekthi enhle” elihlongozwe yiThree Gorges Group.
Ngo-2019, leli damu lakhipha amamitha angu-25.7 kokhonkolo omude, ukhonkolo ubushelelezi futhi uminyene, ingqikithi isatshalaliswa ngokulinganayo futhi inamabhamuza amancane omoya, yaletha “umbhalo” wokwakhiwa kokhonkolo osezingeni eliphakeme.
Ukuqala kuka-2021, leli damu likakhonkolo eliphakeme kakhulu eliphindwe kabili lokugoba ukhonkolo, iSprint liqonde phezulu. Kulindeleke ukuthi idamu lizothululelwa phezulu ngoMeyi nonyaka, okuyiphrojekthi enkulu kunazo zonke eyakhiwa ngogesi emhlabeni eyakhiwa emhlabeni. “NgoJulayi 1 bat iqoqo lokuqala lamayunithi akhiqizayo abekiwe ekukhiqizeni ukubeka isisekelo esiqinile.